Akụkọ - ọkwa ezumike CNY
Ezigbo ndị ahịa na ndị enyi,
Daalụ nkwado gị niile n'ime afọ a ma na-aga n'ihu.
Ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike kemgbe ezumike CNY na-emechi, ndị ọrụ na-agbasi mbọ ike na mmepụta maka mbupu ngwa ngwa.
Ememe ezumike CNY na-amalite site na 26th, Jenụwarị 2022 ruo Febụwarị 9th, 2022.
Ezumike CNY bụ nnukwu ememme na ezumike dị mkpa maka ndị China maka ezinụlọ na-ezukọta.
Anyị ebe a nwere ike unu niile a obi ụtọ afọ ọhụrụ, Ka ị na-ezi, ike na ndabara afọ ọhụrụ 2022. na-atụ anya mma imekọ ihe ọnụ na gị.
N'aka nke ọzọ, ọ dịghị nchegbu na ịkpọtụrụ anyị maka ịtụ ma ọ bụ na-enyere aka, anyị ka dị na akara.
Ụlọ ọrụ Yiwan Apparel Co.,Ltd
Oge nzipu: Jan-10-2022
4. Enweghi akara / ibiputa / DELE akara Dye Mark akara bụ ihe na-enweghị atụ n'elu oke ederede.Akara agba na-abụkarị ihe si na akwa akwa dị ala dị ala na-ezighi ezi ndị na-edobe ọkwa na-ezighi ezi na usoro mmepụta ihe na-akpata na mgbochi nke ịjiji / ibipụta / esiji ...